Nhau - Kunyangwe paine njodzi, kuchena kweganda kunonyanya kufarirwa kupfuura nakare kose
Kuchenesa kana kuchenesa inyaya inopokana zvikuru. Inopa zvinokwezva nzira dzekuvandudza rako.
Kune nzira dzakawanda dzekugadzira ganda kureruka. Izvi zvinosanganisira anokosha ganda makirimu uye laser kurapwa. Nekuda kwemutengo wayo wakaderera uye chengetedzo yepamusoro, vanhu vazhinji vanosarudza mafuta ekuzora.
Kana iwe uri kufunga nezvekuchenesa chigadzirwa, pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kutanga waziva. Ichi chinyorwa chinotsanangura zvakakosha zvinhu, kunyanya zvinoshandiswa.
Kuvhenekesa ganda kunoreva kushandiswa kwekurapa kwakakosha kana zvinhu kugadzirisa kana kurerutsa ganda. Vanhu vanoshandisa mazwi akasiyana kuitsanangura, kusanganisira kuchenesa, kujekesa kana kuchenesa ganda.
Kujekeswa kweganda remunhu kune zvakawanda zvinhu kunogona kukonzera kuti riome. Kuchembera, kusvibisa, guruva, tsvina, mwaranzi inonzi ultraviolet uye makemikari (kusanganisira aya ari muzvigadzirwa zvekuchengetedza ganda) anogona kukuvadza ganda.
Kushaikwa kwezvikafu zvinovaka muviri, sarudzo yemararamiro isina hutano uye kushushikana zvinogona zvakare kukanganisa maitiro pakuonekwa kweganda.
Izvi zvinhu zvakasiyana zvinogona kukonzera matambudziko akasiyanasiyana, anosanganisira erima madenderedzwa, zera makwapa, acne mavanga uye mavara.
Vanhu vanovimba nezvichenesa zvigadzirwa uye marapirwo kugadzirisa aya matambudziko. Ivo vanoishandisa kuvandudza kana kudzoreredza toni yeganda.
Nezvigadzirwa zvemwenje zveganda, iwe unogona kuenzanisa hyperpigmented ganda nzvimbo kune iro ruvara rweganda rakakomberedza. Idzi nzvimbo dzinosanganisira mabarkmark, mamore, chloasma uye matonhe.
Kujekesa kweganda chiitiko chepasirese, kunyangwe paine zvinonzi zvinonyanya kufarira kujekesa ganda muAfrica, Middle East neIndia. Pakazosvika 2013, zvinofungidzirwa kuti panosvika gore ra2018, musika wepasi rose unojekesa chigadzirwa musika unosvika kusvika mabhiriyoni makumi maviri emadhora ekuAmerica.
Zvigadzirwa uye nzira dzekurapa dzinogona kushandisa nzira dzakasiyana siyana kusimudzira hunyoro hwakaenzana uye hwakanaka. Asi zvinopenya zvinonyanya kushanda nekukanganisa kugadzirwa kwemelanin kana nekubatsira kuiparadza.
Melanin ndicho chinhu chikuru chinoita basa muvara rweganda. Iyi mhando yerima polymer. Kune vanhu vazhinji vane ganda rakasviba.
Muviri wemunhu unoburitsa iyi pigment kuburikidza nemaitiro ekugadzira melanin. Masayendisiti akaona mhando mbiri dzechinhu chiri muganda nemvere, dzinoti: Eumelanin (nhema kana shava) uye pheomelanin (yero kana tsvuku). Rudzi chairwo rweganda rinosarudza matauriro aro.
Vazhinji vanojekesa vanoshanda nekudzivisa kugadzirwa kwemavara. Vanoita izvi nekuderedza mashandiro emamwe maenzyme anobatsira mukuita. Iyo inozivikanwa enzyme mu synthesis ndeye tyrosinase.
Muviri wako unovimba neL-tyrosine kugadzira melanin. Mune nhanho yekutanga yekugadzira melanin, tyrosinase inoshandura iyi amino acid kuita L-Dopa. Brighteners anoedza kudzikisira kutaura, kumisikidza kana chiitiko chema enzymes, nekudaro ichidzivirira kugadzirwa kwemavara.
Zvimwe zvinoshandiswa mukuchenesa zvigadzirwa zvinogona kubatsira kutsikisa. Vanobatsira kuparadza melanin iyo yatove mumuviri.
Vanhu vazhinji vanosarudza zvigadzirwa zvekuchenesa ganda nekuti havagutsikane nekushandisa zvipoda kuti vawane chero ganda rinogadzikana. Kunyangwe kana vachikwanisa kuitenga, vanowanzo kutya kutya kurapwa laser.
Nekudaro, zvigadzirwa izvo zvine chinangwa chekuwana wakanaka chimiro kazhinji zvinotambura neyakaipa rap. Sekureva kwemishumo, vanokonzeresa mamwe matambudziko angangoita kuti vasakosha kushandisa zvachose.
Zvinonzi zvakawanda zvezvinhu izvi zvine zvinhu zvinokuvadza. Mune zvimwe zviitiko, vakawanikwa vaine makemikari ane chepfu anogona kukonzera matambudziko eganda, kusanganisira cancer.
Vanhu vanowanzo shandisa izwi rekuti “kuchenesa” kana vachitaura nezve idzi nyaya dzekuchengetedza. Neichi chikonzero, makambani anowanzo dzivisa kuishandisa kurondedzera zvigadzirwa zvavo.
Iko kushandiswa kwezvinhu zvinokuvadza pamusoro pemakore kwakaita kuti mabhenji ekupenda arambidzwe mune dzimwe nyika.
Hatinzwisise zvizere kuti nei vamwe vagadziri vachisarudza ichi chinwiwa chine chepfu. Mukuona kwekuwanikwa kwenzira dzakachengeteka kana dzechisikigo. Zvichida izvi zvinogona kunge zviri nekuda kwekuda kwepamusoro purofiti.
Pazasi isu tinokurukura zvimwe zvine njodzi zvigadzirwa, kana iwe ukazviona, iwe unofanirwa kukuisa iwe ipapo nekuchena cream. Iwe zvakare uchawana ruzivo nezve zvakachengeteka zvinoshandiswa izvo izvo zvakanaka chigadzirwa chinofanirwa kuve nacho.
Ichi chinhu chinonyanya kuzivikanwa icho vagadziri vanowanzo sanganisira mumabikirwo. Zvino, vanhu vazhinji vanoziva njodzi dzayo, izvo zvave kutungamira mamwe makambani kushandisa tsananguro dzakangwara dzeizvi, senge mercury, mercuric ammonia kana mercury chloride.
Mercury yakashandiswa pakuchenesa kweganda kwemakumi emakore. Kana ichiiswa paganda, ine mukana wekudzora kusanganisa kwemelanin, saka inorumbidzwa zvikuru. Kuti uderedze mitengo yemutengesi, mutengo wakaderera uye uri nyore kuwana.
Kubva ipapo, nyika / matunhu mazhinji (kutanga kuma1970 muEurope) akarambidza kushandiswa kwechigadzirwa ichi kuchenesa ganda. Chinhu ichi chakarambidzwa uye chakakamurwa sehupfu muUnited States.
Mercury inogona kugara paganda kwenguva yakareba, saka inogona kukonzera mamwe matambudziko. Zvinogona kukonzera ganda kushanduka uye zvisina basa mavanga. Kune zvekare mishumo yekuti inokanganisa mashandiro ehuropi uye inokanganisa itsvo. Kana ikashandiswa nevakadzi vane nhumbu kana amai vanoyamwisa, inogona zvakare kukonzera chirwere chehuropi muvacheche
Iyi ndeimwe yemagetsi anovhenekera ganda anobatsira kudzora. Inowanzo kukurudzirwa kuti vanhu vane vitiligo vanosarudza kushandisa makirimu kana mhinduro dzemusoro dzine benzophenone. Chirwere ichi chinoonekwa nenzvimbo dzakareruka uye dzakasviba paganda. Iyo komponi inobatsira kudzora iyo pigment muganda uye kuita kuti ganda rinonzwika kunyange.
Asi inogona kuparadza melanocytes uye kuburitsa melanosomes inodiwa kune melanin synthesis. Naizvozvo, kuishandisa kunogona kukonzera kusingaperi kana kusadzokororwa discoloration.
Kunze kwe vitiligo, vanachiremba havakurudzire kushandisa monobenzophenone pasi pemamwe mamiriro. Asi iwe unozoshamisika kuona kuti mamwe makambani anoisanganisira mune zvakajairika zvizorwa. Matambudziko anogona kukonzerwa nekushandisa zvigadzirwa izvi anosanganisira asina kuenzana pigmentation uye kuwedzera kunzwisiswa kuzuva.
Chinhu chinodzivirira ganda chinokanganisa, kuitira kuti kushandisa kwako kuve nezvinokatyamadza kune vamwe. Zvinonzi kana ikashandiswa, inogona kukonzera kupindika kwevamwe chete nekubatana neganda.
Uri kushamisika? Iwe unogona kunge usati wamboziva kare kuti iyo steroids inogona kunge iripo mune machena zvigadzirwa. Asi vanogona.
Steroid inogona kubatsira kuchenesa ganda munzira dzakasiyana. Chimwe chazvo chine chekuita nekuti vanodzora sei mashandiro emelanocytes. Asi ivo vanogona zvakare kudzikisira echisikigo ganda maseru kutendeuka.
Nekudaro, ndiro dambudziko hombe kuti zvinhu zvine nharo hazvina kuiswa mukirimu yekuchenesa. Eczema uye psoriasis zvirwere zviviri izvo dermatologists zvinowanzo shandisa kurapa. Dambudziko chairo kushandiswa kwenguva refu.
Steroid, kusanganisira corticosteroids, anonyanya kushandiswa kurapa kupisa kwezvirwere zveganda. Chiremba chinofanirawo kupihwa, zvinoreva kuti zvirinani kuti usazviwana muzvizoro zvadzo. Kushandiswa kwenguva refu kwavo kunogona kudzora kukuvara kusingaperi paganda.
Mazhinji zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda zvine zvicherwa mafuta sechinhu chinogadzirwa. Iyo inogadzira inoishandisa kubatsira kunyorovesa ganda. Izvo zvakare zvakachipa-zvakachipa pane zvakasikwa zvakakosha maoiri.
Zvisinei, vanhu vanga vachinetseka pamusoro pekugona kwechinhu ichi kukonzera matambudziko eganda. Mineral mafuta anogona kuvhara ganda rako pores, zvichiita kuti zvive zvakaoma kubvisa zvinokuvadza zvinhu. Naizvozvo, iwe unogona kusangana nematambudziko senge acne uye mapundu. Kuita kuti zvinhu zviwedzere, izvo zvinongedzo zvinofungidzirwa kunge zvine carcinogenic.
Iwe haufanire kuwana mabhenefiti ekujekesa ganda kubva pane izvi. Parabens iboka rekuchengetedza. Vagadziri vanonyanya kuvashandisa kuwedzera hupenyu hwesherufu yezvizoro.
Zvinetso zvinokonzereswa nechinhu ichi zvinosanganisira kupindira nehurongwa hwako hwekubereka. Yakawanikwa zvakare ichiwedzera njodzi yekenza.
Pano, iwe une zvigadzirwa zvinozivikanwa kwazvo muzvigadzirwa zvekuchengetedza ganda. Hydroquinone imushonga unodzivisa melanin synthesis nekudzivirira tyrosinase. Izvi zvinoshanda kwazvo. Naizvozvo, inowanzo kuwanikwa mune akawanda machena macream.
Iyi haisi yekutyisa sezvinoita zvimwe zvinokuvadza. Izvi zvinodaro nekuti nyanzvi dzimwe nguva dzinozvikurudzira, kunyanya iyo 2% (kana yakaderera) yevasungwa vhezheni. Asi iwe unoona sei kusimba kweimwe yemafuta machena, kunyanya kana zvisina kutaurwa?
Pamusoro pesimba, kushandiswa kwenguva refu kwehydroquinone kunowedzerawo njodzi yemhedzisiro. Iyo inogona kukonzeresa kugadzikana kweganda, mune iyo kesi inogona kuve yechigarire. Izvi zvinogona zvakare kukanganisa mamwe ma enzymes anoita chinzvimbo chakakosha mumuviri wemunhu.
Doro, dioxane uye phthalates zvimwe zvinogona kukuvadza zvinongedzo zvaunofanira kutarisisa muganda rako rinovheneka marimu kudzivirira rima mavara.
Kana uchitaura nezvezvisikwa, akachengeteka ganda anovhenekesa vamiririri, rondedzero yacho ichave isina kukwana kana ikasasanganisira inotora yemichero yemichero (senge maorenji uye mandimu). Izvi zvinobatsira, kunyanya nekuda kwehuwandu hwavo hwevhitamini C. Zvinotendwa kuti chiganda chine ganda rinochenesa zvinhu.
Zvisinei, zvinowanzoitika kuti vanhu vanotaura nezvevhitamini C zvakanyanya kubva pakuona kwekubatsira kweganda. Iyo mukomboni ine antioxidant zvivakwa uye inogona kubatsira kudzivirira zviratidzo zvekukwegura, senge yakanaka mitsara uye kuunyana.
Citrus yakatorwa inofungidzirwawo kuti inobatsira mukugadzirwa kwecollagen, chinova chakavanzika kuseri kweganda rakasimba, revechidiki. Ivo vanogona kuvandudza maratidziro eganda uye kusimudzira kukura kwemasero matsva.
Ichi chinongedzo chinonziwo vhitamini B3 uye chinowanzo kuwanikwa mune zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda. Chimwe chezvikonzero zveichi ganda rayo rinojekesa maitiro. Inobatsira kudzikisa kugadzirwa kwemelanin.
Nicotinamide inogadzira antioxidant mhedzisiro uye ine anti-kupisa zvinhu. Uchaona kuti inochengetedza hunyoro uye inobatsira kugadzira ganda rakatsetseka uye rakapfava. Mavhitamini anobatsirawo kugadzirisa huni hweganda.
Kana ichishandiswa neN-acetylglucosamine, kushanda kwevhitamini iyi kunofungidzirwa kuti kunowedzerwa.
Iwe unogona kunge wakanzwa kuti vamwe vanhu vanokurudzira kushandisa michero (senge mulberry, bearberry kana bhuruu) kuchenesa ganda rako. Izvi zvinokonzerwa nekuvapo kwekomboni inonzi arbutin, inonziwo hydroquinone-β-D-glucoside.
Arbutin inobatsira kudzikisa kugadzirwa kwemelanin mumuviri. Iine maomeri maviri: α uye β. Iyo alpha isomer inogadzikana uye inokodzera kujekesa ganda.
Ichi chigadzirwa chechisikigo chinoonekwa senge yakachengeteka imwe nzira kune akakurumbira decolorants mune zvakawanda zvigadzirwa. Kana tyrosinase ichizobvumidzwa, iyo yakachena fomu ndiyo inonyanya kushanda.
Hazvisi zvese zvine izwi rekuti "acid" zvinokuvadza. Zvizhinji zvezvinhu izvi zvakasikwa uye zvinobatsira. Saka usatya.
Azelaic acid chinhu chebhari uye zvimwe zviyo, uye inowanzo shandiswa kurapa acne ne rosacea. Iyo pH inenge yakafanana neganda, saka yakachengeteka kwazvo.
Vatsvagiri vaona kuti chinhu ichi chinogona kubatsira kuchenesa ganda. Zvidzidzo zvakaratidza kuti iyi inzira inoshanda yekurapa kupunduka kweganda. Zvinogona kubatsira kudzivirira kugadzirwa kwemelanin.
Iyi tripeptide molecule inozivikanwa inozivikanwa yekurwisa kukwegura inodzivirira ganda kubva kukuvara kweiyo oxidative. Kujekesa ganda ndechimwe chezvakanaka zvakawanda zvine chekuita nazvo.
Glutathione zvakare ine mukana wekudzivirira kukuvara kwezuva. Kuchenesa ganda kazhinji kunoderedza kugona kwezuva kwako kugona. Asi chinhu ichi chine anti-oxidant zvimiro uye zvinogona kukudzivirira kubva kumwaranzi ye UV.
Nekudaro, nyanzvi dzinoti mamorekuru ane yakadzika yekumwa kunyatsoshanda painoshandiswa munharaunda. Imwe nzira yekugadzirisa dambudziko iri kurishandisa pamwe nemimwe mishonga (yakadai sevhitamini C).
Sezvo isu tese tichiziva, maChinese anoishandisa pamhando dzakasiyana dzeganda mamiriro. Zvidzidzo zvakaratidza kuti zvakatorwa kubva kumuti we licorice, kunyanya galapudine, zvine mukana wekujekesa ganda.
Aya maficha anotendwa kuti anovhenekera ganda munzira dzakasiyana. Asi ivo vanonyanya kushanda nekudzivirira chiitiko che tyrosinase-pamwe kusvika 50%.
Zvidzidzo zvakaratidza kuti nekuti inogona kudzvinyirira synthesis ye melanin, inogona kunyatso kuchenesa ganda. Inoita izvi nekudzivirira chiitiko che tyrosinase.
Crystal poda inogadzirwa neyakaomeswa mupunga kuvirisa, iyo inokodzera kwazvo ganda rakakuvara uye rakajeka. Inowanzo kuwanikwa panguva yekugadzirwa kweJapan mupunga waini. Zvinonzi maJapan akashandisa iyo kwenguva yakareba kurapa kupenya kweganda.
Iwe unofanirwa kucherechedza kuti zvakasiyana neyakagadzikana kojic acid dipalmitate yakagadziriswa nemamwe makambani. Kunyangwe zvimwe zvigadzirwa zvingabatsirawo, hazvibatsiri se kojic acid.
Iyi ndeimwe yeaya maviri alpha hydroxy acids (AHA) ayo akave akadzidzwa zvakanyanya-imwe iri lactic acid. Nekuda kwehukuru hwavo hwemamorekuru, ivo vanokosheswa nekukwanisa kwavo kupinda pamusoro peganda repamusoro.
Vanhu vazhinji vanoziva kuti glycolic acid is exfoliant. Inobatsira kusimudzira kugona kwesero uye kubvisa isina kunaka kana akafa maseru eganda. Asi izvi zvinopfuura izvo.
Nechinhu ichi, unogona zvakare kuve neakajeka ganda. Zvidzidzo zvakaratidza kuti zvinogona kukubatsira kudzikisa kugadzirwa kwemelanin mumuviri wako, nokudaro uchisimudzira matauriro eganda.
Kunyangwe kuchenesa kana kuchenesa inogona kunge iri nyaya ine nharo, havazi vese vanogona kuitisa. Vanhu vane matambudziko eganda (senge zera mavara, mavara, mativi erima uye mabara) zvirokwazvo havazotyisidzirwa nemishumo yakaipa nezve dambudziko iri.
Icho chokwadi ndechekuti vanhu kazhinji havafarire kuchenesa kweganda nekuda kwekugona kwekuita kwakashata. Tsananguro huru yerudzi urwu rwechinetso ndeyekuti mugadziri anoshandisa zvigadzirwa zvine njodzi, pamwe kuti awane mari. Sezvo vatengi vanova vanoziva, maitiro anokuvadza aya ave kuchinja.
Sezvauri kuona pamusoro, pane zvakachengeteka, zvakasikwa zvigadzirwa izvo zvinogona kuita kuti rako riwedzere kupenya uye hutano. Iwe unongoda kutsvaga zvigadzirwa izvi pakati pezvigadzirwa zvaunoronga kutenga. Usati watenga, ndapota tsvagirisa pane chero zvigadzirwa zvatisina kutaura pano.
Makuki anodikanwa akakosha zvakanyanya kune kujairika kushanda kwewebhusaiti. Ichi chikamu chinongova nemakuki anovimbisa izvo zvakakosha mabasa uye chengetedzo maficha ewebhusaiti. Aya makuki haachengete chero ruzivo rwemunhu.